ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ သံအမတ်ကြီး၊ H.E. Ms. Riikka Laatu အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ သံအမတ် ကြီး၊ H.E. Ms. Riikka Laatu အား နေပြည်တော်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံး၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ မြေယာ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်သူ H.E Mr. Hiroshi NARAHIRA အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၆) ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ မြေယာ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - MLIT) မှ ဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်သူ H.E Mr. Hiroshi NARAHIRA အား နေပြည်တော်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ဂျပန်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ပို့ဆောင်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးကျင်းပ
(၂၆.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ (၉:၃၀)နာရီ
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ဂျပန်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ပို့ဆောင်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက် (၉:၃၀)နာရီအချိန်တွင် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
တယ်လီဖုန်းကိရိယာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ခွင့်လိုင်စင်နှင့် စမ်းသပ် ပြသခွင့် လိုင်စင် ရရှိသော ကုမ္ပဏီများစာရင်း
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ တယ်လီဖုန်း ကိရိယာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ခွင့်လိုင်စင်နှင့် စမ်းသပ်ပြသခွင့် လိုင်စင် လာရောက် လျှောက်ထားသူများအား ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး (၂၅.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့သော ကုမ္ပဏီများ စာရင်းအား အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ပေးခဲ့သော ပြည်တွင်း/ပြည်ပကုမ္ပဏီများစာရင်း
ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းလိုင်စင် လာရောက် လျှောက်ထားသူများအား ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ နှင့်အညီ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး (၂၅.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ပေးခဲ့သော ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများ စာရင်းအား အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။